Ireo refy roa amin'ny varotra vaovao tokony harahinao | Martech Zone
Merchandising (araka ny Wikipedia hatramin'ny 19 martsa tamin'ny 10:18 maraina Pacific Daylight Time) dia:
Ny fomba fanao izay mandray anjara amin'ny fivarotana vokatra amin'ny mpanjifa antsinjarany. Amin'ny ambaratonga fivarotana antsinjarany, ny varotra dia manondro ny karazan-vokatra azo amidy sy ny fampisehoana ireo vokatra ireo amin'ny fomba izay mandrisika ny fahalianana ary mitaona ny mpanjifa hividy.
Ny tantara voalohany (apokrifa) momba ny varotra sy ny angon-drakitra dia mikasika ny diaper sy labiera azo esorina. Nasehon'ilay matematika fa ireo olona nividy diapia azo nariana tany amin'ny fivarotana mora vidy, fa tsy tamin'ny dia lavitra nokasaina nankany amin'ny magazay lehibe, dia naka labiera enina ihany koa.
Ny andraikitry ny mpivarotra dia ny manapa-kevitra raha hampiaraka ny entana labiera ny fitahirizana ireo entana roa ireo, na ny fampisarahana azy ireo ara-batana dia hampitombo ny fivarotana zavatra hafa mamporisika. Ny mpivarotra data-drive marina dia samy nanandrana ny roa - amin'ny jeografia samy hafa - amin'ny faritra sosialy sy toekarena samihafa - amin'ny isa hafa.
Nahatratra ny tampon'ny angon-drakitra ny varotra tao amin'ny magazay rehefa nivoaka avy any Japon ny tantara ny amin'ny nanovan'ny magazay 7-Eleven ny vokatra azon'izy ireo teny ambony talantalana mifototra amin'ny ora antoandro mba hampitomboana ny toerana fivarotany voafetra.
Ny mpanamboatra sasany dia manana tombony kely rehefa miasa amin'ny magazay lehibe. Ho takalon'ny taha ambony, ambany ny vidin'ny fandefasana, fonosana manokana, sns. Ny rojom-barotra dia mety hanome fiheverana manokana ho an'ny mpiara-miasa tsara indrindra.
Fa inona no mitranga rehefa tsy hita maso na mipoitra mavitrika ny fampisehoana fivarotana arakaraka ny mpividy? Tongasoa eto amin'ny varotra an-tserasera.
Aiza, Aiza ny vokatrao?
Raha mivarotra amin'ny alàlan'ny Amazon, BestBuy na Costco ianao, dia tsy fantatrao na hiseho amin'ny pejy fandraisana aza ny vokatrao, ao anaty sokajy iray na mandritra ny fikarohana eo an-toerana raha tsy hoe efa nifampiraharaha mialoha ireo zavatra ireo ary vintana tsara izany.
Eto no misy ny metrika vaovao Findability ary Fivarotana Mandrosoa.
Noforonin'i Analytics amin'ny atiny:
Findability dia refin'ny fahaizan'ny mpanjifa mahita vokatra an-tserasera.
Fivarotana misy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny mpanjifa mety manapa-kevitra
Moa ve misy fampahalalana ampy momba ny famaritana, ny habeny, ny fonosana, ny vidiny sns, mba hametrahan'izy ireo ao anaty sarety fiantsenana?
Ny mpanorina ny Content Analytics David Feinleib dia nilaza fa maherin'ny 75% ny fikarohana eo an-toerana amin'ny tranokala e-varotra lehibe toa an'i Amazon sy Walmart.com dia teny fitadiavana fa tsy anarana marika. Ahoana no ahalalanao fa miseho amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny magazay ny vokatrao? Tena zava-dehibe izany satria ny vokatra amina toerana telo voalohany dia mankafy inefatra ny fifamoivoizana noho ny vokatra hafa rehetra mifangaro. Io olana io, mazava ho azy, dia vao mainka mampitombo ny fividianana finday.
Amin'ny lafiny Shopability, ny mpivarotra an-tserasera iray dia mila mahafantatra raha ny fampahalalana marina dia ampitaina amin'ny mpividy amin'ny endrika mety, amin'ny fotoana mety, hamadihana azy ireo ho mpividy. Ny sary, ny specs ary ny fanadihadihana dia tsy maintsy misy hanakanana ny varotra.
Teknolojia ho famonjena
Isaky ny ora, ny Content Analytics dia manara-maso ireo tranokala fivarotana anisany Amazon, Best Buy, Costco, CVS, Drugstore.com, Sam's Club, ary Walmart hahitanao hoe aiza sy ahoana ny fisehon'ny vokatrao.
Ny entana iray dia tsy misy tahiry? Mahazo fanairana ianao.
Item iray very ny filaharany amin'ny valin'ny fikarohana? Mahazo fanairana ianao.
Ny mpifaninana aminao manova ny vidiny amin'ny mpivarotra ambongadiny? Mahazo fanairana ianao.
Tsy ampy ny isan'ny product reviews? Mahazo fanairana ianao.
Fahitana tsy fahita amin'ny fitaovana finday? Mahazo fanairana ianao.
Sary tsy manome araka ny nandrasana? Mahazo fanairana ianao.
Na dia mety tsy dia mahavariana aza ny teknolojia, ny fanangonana sy ny famakafakana ireo karazana data marina dia manaporofo fa tena sarobidy tokoa amin'ny tontolon'ny Internet.
Raha ao amin'ny tontolon'ny ecommerce ianao dia fotoana izao hanampiana Findability sy Shopability amin'ny lexicon metrikao.
Tags: ecommercemetatra ecommercefahitanafivarotana